Fanabeazana · Desambra, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Fanabeazana · Desambra, 2010
Tantara mikasika ny Fanabeazana tamin'ny Desambra, 2010
Amerika Latina 20 Desambra 2010
Taorian'ny fifaranan'ny fitokonana roa andro nataon'ny mpianatra, nitoetra tao amin'ny "campus" foibe an'ny Anjerimanontolon'i Puerto Rico ny mpitandro filaminana, voalohany izao hatramin'ny 1981, izay mialoha ny fitokonan'ny mpianatra amin'ny 14 Desambra. Mitobatobaka ny fanehoan-kevitra amin'ny tontolon'ny blaogy sy ny media sosialy.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 09 Desambra 2010
I Abdulla Al-Moussawi, antsoia koa hoe “Sayed, ilay vatosoan'i Arabia,” izay heverina ho Maradona any aoriana, no niteraka resabe tao amin'ny bilaogin'i Mark. Mpana-talenta vao sivy taona monja i Abdulla, afaka jerenao eto amin'ity sary mihetsika ao amin'ny YouTube ity ny filalaovany baolina kitra. Ity sarimihetsika ity no hitan'i Marcel, terantany néerlandais mpitsikilo...